China Plastiki inokanganisa mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kuwedzeredza kwepurasitikiyakakosha jekiseni kuumbwa maitiro, ayo anoshandiswa kusanganisa zvikamu zvezvinhu zviviri kuita chimwe chikamu kuburikidza nejekiseni kuumbwa. Zvikamu zviviri zvakaumbwa kaviri muforoma dzakasiyana uye michina yejekiseni.
Plastiki pamusoro pekuumbwa inzira yekuisa imwe kana akawanda aripo epurasitiki zvikamu zvezvinhu zvakasiyana mune jekiseni muforoma pamberi jekiseni, wozobaya purasitiki muforoma, jekiseni rezvinhu rinovhara kana kuputira izvo zvakafanorongedzerwa kuita chikamu chimwe chete.
Chekutanga nhanho: gadzirira pre-yakaiswa chikamu. (Mold1)
Chechipiri nhanho: isa pre-yakaiswa mujekiseni muforoma, uye ita pamusoro-kuumbwa nepurasitiki nebwe. (Mold2)
Chikamu chekupedzisira chepurasitiki
Pane mhando mbiri pamusoro kuumbwa
Type 1: Izvo zvakaiswa-zvikamu / zvikamu zviri mapurasitiki, ayo akambogadzirwa mune imwe mold. Iyi nzira ndeye maviri-akapfura jekiseni kuumbwa. Iyi ipurasitiki pamusoro pekuumbwa kwatakakurukura pano.
Type 2: Izvo zvakagara zvaiswa zvikamu hazvisi zvepurasitiki, asi zvinogona kunge zviri simbi kana zvimwe zvikamu zvakasimba (semuenzaniso zvemagetsi zvigadzirwa). Tinodaidza iyi nzira yekuisa kuumbwa.
Kazhinji zvikamu zvakafanogadzirirwa zvakapatsanurwa kana zvakaputirwa zvizere nezvinhu zvinotevera (zvigadzirwa zvepurasitiki) mune yekuumba-maitiro.
Unoziva kushandiswa epurasitiki pamusoro Kuumbwa?
Kune zvakawanda zvinangwa zvepurasitiki pamusoro pekuumbwa. Kazhinji pakati pavo ndeaya anotevera:
1. Wedzera ruvara rwekunakisa chitarisiko (aesthetic kukanganisa).
2. Ipa inzvimbo yekubata iri nyore pachikamu.
3.Kuwedzera inochinjika nzvimbo kune akaomarara zvikamu kuti zviwedzere kusimba uye kubata kwekunzwa
4. Wedzera zvinhu zvakasununguka kuvhara chigadzirwa kana chisimbiso chemvura-chiratidzo.
5. Sevha nguva yegungano. Iko hakuna kudikanwa kwekubatanidza iyo simbi chikamu uye epurasitiki chikamu nemaoko kana otomatiki. Iwe unongoda kuisa chikamu che Hardware muforoma uye jekiseni chikamu chepurasitiki. Iko hakuna kudikanwa kwekuzviunganidza zvachose.
5. Gadzirisa chimwe chikamu mukati meimwe usingashandisi zvekubatanidza kana zvinonamatira.
Imhandoi yezvigadzirwa ipurasitiki pamusoro pekuumbwa yakakodzera?
Iyo epurasitiki yekuwedzeredza-kuumba maitiro inokodzera zvigadzirwa zvakawanda, izvo zvinosiyana zvinoenderana nemamiriro chaiwo ezvinhu zvigadzirwa. Kazhinji zvinosanganisira mabhurosi emazino, maturu anobata (senge mabhora asina tambo uye screwdrivers) uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvega (senge shampoo mabhodhoro uye shavers), zviteshi zvewaya, plugs, SIM vanobata, nezvimwe.
PC & TPU inokatyamadza isina mvura kesi
PC & TPU inokatyamadza isina mvura bhatiri musuwo
PC & PC / ABS yekuwedzeredza epurasitiki kesi yemagetsi chigadzirwa
PC & TPU yekumisikidza inodzivirira kesi yenhare mbozha
Mavara maviri akakura saizi inodarika epurasitiki chikamu
ABS & TPE yekuwedzeredza vhiri
Heano mimwe mienzaniso yekuwedzeredza yekuumba kunyorera:
1.Purasitiki yakaoma inovhara mapurasitiki - kutanga kwezvose, chikamu chakaomarara chepurasitiki chakagadzika chakaumbwa. Ipapo imwe epurasitiki yakaoma inoiswa mukati kana kutenderedza zvikamu zvakagara zvakamiswa. Mapurasitiki anogona kusiyana muvara uye / kana resin.
2.Purasitiki yakaoma yakaputirwa mune yakapfava elastomer resin - kutanga, zvikamu zvepurasitiki zvakaomarara zvakagara zvaiswa. Iyo elastomer resin (TPU, TPE, TPR) inozogadzirwa pamusoro kana kutenderedza zvikamu zvakagara zvakamiswa. Izvi zvinowanzo shandiswa kupa yakapfava ruoko-inobatwa nzvimbo yezvikamu zvakaoma.
3.Purasitiki yakaputirwa simbi - kutanga kwezvose, hwaro hwesimbi hwakagadzirwa, kukandwa kana kuumbwa. Zvadaro, zvikamu zvakagara zvaiswa zvinoiswa mujekiseni mhango, uye plastiki inogadzirwa mukati kana kutenderedza simbi. Izvi zvinowanzo shandiswa kutora zvikamu zvesimbi muzvikamu zvepurasitiki.
4.Elastomer resin inovhara Metal - Chekutanga, chikamu chesimbi chakagadzirwa, chakakandirwa kana chakaumbwa. Iyo yakagara-yakamisikidzwa simbi zvikamu zvinobva zvaiswa mukati meiyo jekiseni muforoma uye iyo elastomer resin inojowa mukati kana kutenderedza simbi. Izvi zvinowanzo shandiswa kupa yakapfava, yakanyatso-batwa pamusoro.
5. Soft elastomer nebwe putira PCBA kana zvemagetsi zvinoriumba, mwenje-inoburitsa module, nezvimwe
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kune zvimwe zvisingakwanisike uye matambudziko ekuenderana pakati pezvinhu zvakasiyana zvinoda kutariswa kuti zvinyanye kuwanda. Iwe hauna kuganhurirwa kumhando mbiri dzezvinhu. Isu takaona zvimwe zvigadzirwa, muchikamu chine matatu akasiyana epurasitiki masosi akabatanidzwa kuita yakawanda-mavara akapindirana pamusoro. Heino muenzaniso wakapusa wechigadzirwa iwe unenge uchinyatso ziva nacho: chigero.
Kazhinji, izvo zvakagara zvaiswa-chikamu zvinhu kana zvikamu zvinoiswa mujekiseni, panguva iyo iyo inowanda mapurasitiki resin anoiswa mukati kana kutenderedza zvikamu zvakagara zvaiswa. Kana iyo yakavharirwa jekiseni zvinhu zvadzikiswa uye zvaporeswa, izvo zviviri zvinhu zvinosanganiswa pamwechete kuita chikamu chakakosha. Kuwedzera matipi: Kazhinji zano rakanaka kuti zvikamu zvako zvakamiswa-mberi uye zvekumonera zvibatwe nenzira. Nenzira iyi, izvo zviviri zvinhu zvinogona kusanganiswa kwete chete chemakemikari, asi zvakare panyama.
Chii chakanakira kupfuura kuumbwa mukugadzira?
The pamusoro Kuumbwa muforoma ane nyore mamiriro uye kusanduka muitiro.
1.Iyo inoshanda kune iyo zvikamu zvine hombe yekufukidza zvikamu, kunyanya izvo zvikamu zvine inverted buckle. Rudzi urwu rwepurasitiki zvikamu zvakaoma kujowa mune imwechete jekiseni kuumbwa muchina neaviri-ruvara chakuvhuvhu, icho chinogona kuwanikwa nepurasitiki yakafukidzwa jekiseni kuumbwa.
2. Kana chimiro chepurasitiki yakatarwa iri nyore uye saizi iri diki kwazvo, uye chikamu chekupedzisira chine saizi hombe, inokodzera kutora
epurasitiki yakavharwa jekiseni kuumbwa. Panguva ino, chakuvhuvhu cheiyo yakatarwa chikamu muforoma inogona kuitwa diki kwazvo kana yakawanda mhango mhango, iyo inogona kudzikisa zvakanyanya mutengo weiyo fomu.
3. Kana zvikamu zvakaiswa kare uye zvinhu zvakavharirwa zvese mapurasitiki (resini), zvinofungidzirwa kuti maitiro ekuumba jekiseni anofanirwa kushandiswa mukugadzira kwakawanda panzvimbo pekunyanyisa kuitira kuti uwane mhando yepamusoro, kugadzirwa kwepamusoro uye nemutengo wakaderera. Kana diki batch mangoda kugadzirwa kana mhando zvinodiwa zvisina kukwirira, kuwanda kunogona kushandiswa kudzivirira kudyara kwekaviri-jekiseni kuumbwa muchina uye kudhura kwekugadzira chakuvhuvhu.
Ndezvipi zvinhu izvo zvakagara zvaiswa zvikamu zvakagadzirwa?
Tinodaidza izvo zvikamu zvakatanga kuiswa muforoma zvikamu zvakagara zvaiswa (kana zvakagara zvakamisikidzwa).
Izvo zvakagara zvaiswa zvikamu zvinogona kuve chero zvikamu zvakasimba, chakaumbwa simbi chikamu, chakaumbwa epurasitiki chikamu, kana kunyangwe chigadzirwa chiripo, senge nati, sikuru, kana yemagetsi yekubatanidza. Idzi zvikamu zvakagara zvasungwa zvichasanganiswa nemapurasitiki akazobayiwa-jekiseni kuti agadzire chikamu chimwe chete nemakemikari chiito uye kubatana kwemishini. Iyo elastomer resin (TPU, TPE, TPR) zvakare mapurasitiki, asi haina kukodzera kuve akafanorongedzwa zvikamu.
Nzira yekusarudza mapurasitiki epurasitiki pamusoro pekuumba?
Mapurasitiki resin anoshandiswa nekupfuura kuumbwa anowanzo kuve epurasitiki. Dzinotanga nemhando yezvimedu, uye tembiricha yadzo inonyunguduka kazhinji inodzika pane yezvikamu zvakagara zvadzivirirwa kuitira kuti zvikamu zvakaiswa zvisati zvakuvadzwa netembiricha yakakwira. Izvi zvidimbu zvinosanganiswa nemishonga yekuwedzera seyemavara, anopupa furo uye mamwe mafiringi. Ipapo inodziyirwa kunzvimbo inonyungudika uye jekiseni muforoma semvura. Pane zvimwe zvausingakwanise pazvinhu zvinokodzera kupfuura kuumbwa. Kana zvikamu zvakagara zvaiswa zvikamu zvesimbi, unogona kushandisa chero epurasitiki sekuwedzeredza zvinhu. Matambudziko ekuenderana anogona kuvapo kana chikamu chakaiswa kare chakagadzirwa neimwe resin yepurasitiki (rabha kana TPE) ine poindi yakanyunguduka.
Unoziva jekiseni Kuumbwa muchina pamusoro pamusoro Kuumbwa?
Jekiseni Kuumbwa muchina unoshandiswa mupurasitiki pamusoro-kuumbwa chinhu chakajairika jekiseni kuumbwa muchina, iyo yakakamurwa mhando mbiri: yakamira uye yakatwasuka.
1. Vertical jekiseni Kuumbwa muchina inotora nzvimbo yakawanda kupfuura yakatwasuka jekiseni kuumbwa muchina weiyo toni, izvo zvisiri nyore kuchengetedza, saka iyo toni inowanzo kuve diki. Kunyanya kukodzera zvidiki zvidimbu zvidimbu kana zvakagara zvaiswa zvikamu hazvisi nyore kuti zvigadziriswe muforoma.
2. Horizontal jekiseni Kuumbwa muchina ine hombe tonnage uye diki yekugara nzvimbo, iyo inokodzera kuumba yakakura saizi zvikamu.
How kusarudza jekiseni Kuumbwa muchina pamusoro pamusoro Kuumbwa?
1. Vertical jekiseni Kuumbwa muchina unowanzo shandiswa zvidiki zvidimbu senge waya zviteshi uye zvinobatanidza, magetsi plugs, lenses zvichingodaro. Iyo maumbirwo akareruka uye anoshanda.
2. Horizontal jekiseni Kuumbwa muchina unoshandiswa kune yakakura saizi zvikamu, iyo ine simba rakaringana uye yakarerekera kushanda.
3. Mavara maviri-ejekiseni jekiseni inokurudzirwa kune pre-yakamisikidzwa zvikamu uye zvakavharirwa zvinhu, izvo zvinogona kuwana zvirinani kunaka uye kugadzirwa pane zvakavharirwa jekiseni kuumbwa.
Iyo jekiseni inoumba pamusoro pekuumba
Kukurira kazhinji kune maviri seti ejekiseni kuumbwa. Imwe ndeye kuumbwa kwechikamu chakaiswa kare, imwe yacho ndeyekuumba-chikamu chekupedzisira.
Kana zvikamu zvakagara zvaiswa zvisina-mapurasitiki kana zvisina kudiwa jekiseni kuumbwa, chete chete seti yemahombe molds inodiwa. Tinodaidza iyi nzira yekuisa kuumbwa.
Kambani yeMestech ine ruzivo mupurasitiki-yakapfeka jekiseni kuumbwa, kunyanya mupurasitiki-yakapfeka jekiseni kuumbwa kwemahombekombe emhando dzakasiyana dzemagetsi nemagetsi zvigadzirwa zvine Hardware sezvikamu zvakagadzwa. Mestech zvakare inoshongedzerwa neakawanda maviri-mavara jekiseni kuumbwa michina, iyo inogona kuburitsa dzakasiyana siyana-mbiri-mavara epurasitiki mativi, epurasitiki-akavharwa zvikamu zveforoma uye jekiseni kuumbwa. Kana iwe uchida iyo, tapota taura nesu.
Pashure: Matipi ezve chaiyo epurasitiki zvikamu dhizaini uye kuumbwa
Zvadaro: In-Mould Kushongedza-IML